Kuze kube manje, iningi labakhiqizi lihlanganyela amathayi abo ehlobo nge-SUV, kuye ngokuthi uhlobo lwemoto, kanye nokusetshenziswa kwalo. Yingakho, uma ungazi kahle kule nkinga, kufanele usebenzise amasevisi ochwepheshe. Kodwa nokho ezinye izincomo ekukhethweni kwamathayi, sizokwenza lapha.
Amathayali omgwaqo ongaphandle, ozosetshenziswa ehlobo ezimweni ezingekho emgwaqeni, ahlale ehlushwa imithwalo. Futhi ziyahlukahluka kakhulu kulabo abavela lapho behamba nge-asphalt. Yingakho iningi labakhiqizi banamuhla benza amathayi abo ama-SUV, banikezwe izimo zezulu nezomgwaqo.
Kunzima kakhulu ukuqinisekisa ukuphepha kwesondo ngesikhathi uhamba ngemoto futhi ungena emgwaqweni, nangomgwaqo omile owomile. Ngakho-ke, ukuze ukwazi ukunqoba imoto, isibonelo, ihlane elisemaphandleni lizodinga amathayi aphezulu, anabelusi abahle. Kodwa-ke, izimfanelo ezinjalo kwi-asphalt eyomile zihlinzeka kakhulu, ukuqhuma ibanga kuzonyuka, futhi ukusingatha kuyonakele. Ngaphezu kwalokho, lapho ushayela emgwaqweni oqinile, oqinile, izigqoko zenza umsindo ozwakalayo.
Uma uhlela ukusebenzisa imoto ezindaweni zasezindaweni zasemadolobheni, khona-ke amathayi omgwaqo ongekho emgwaqweni ozoyidinga umgwaqo omkhulu. Banephethini eliqondisayo elizoqinisekisa ukunamathela okuphelele kokubili kokunye okunomile nokumanzi okumanzi. Umsebenzi ofanayo wenziwa yizingxenye eziphezulu zezinyawo.
Uma umgwaqo ubi, ngakho-ke, ukusebenza kahle kwamathayi omgwaqo kunciphisa. Kodwa-ke, uma sicabanga ukuthi ama-SUV amaningi emadolobheni anokudluliswa kwe-wheel-wheel, ngamakhilomitha ambalwa eceleni komgwaqo, amathayi anjalo azokwanela.
Amathayi we-off-roader nawo ahlukaniswa nekilasi "lokunethezeka". Zisetshenziswa ezimweni zomuzi, futhi ukusebenza okuthuthukisiwe kunganikeza umsindo ophansi nokudlidliza. Emathayheni anjalo, umvikeli uhlome iphethini elincane, futhi amabhlokhi akhonza ukunciphisa "imiphumela emibi" anciphisa. Konke lokhu kuzoqinisekisa ukunyakaza okuthula nokunethezeka.
Ungayithola kanjani ukuyekethisa?
Le nkinga ingenye yezinhloko. Futhi isisombululo esinjalo ngamathayi afakwe "M + S". Lokhu kusho ukuthi baphakathi phakathi kwezwe eliphansi ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu nokuziphatha okuhle ku-asphalt. Amathayi anjalo aziphatha ngokufanele emgwaqweni ongcolile, futhi ukuphepha kuqinisekisiwe lapha.
Ububanzi bezinhlinzeko zamathayi asemgwaqweni uye wanda kakhulu eminyakeni yamuva. Abakhiqizi basekhaya nabomhlaba banikeza abanikazi bamoto ngonyaka ukukhetha imikhiqizo ecebile, lapho imibono yakamuva, izinqubo zobuchwepheshe kanye nemibono kutholakala. Kodwa naphezu kwakho konke lokhu, ukhethe amathayi ama-SUVs, thola izici zabo ezicacile futhi unqume ukuthi yiziphi izimo imoto yakho ezoyisebenzisa. Khona-ke ungakwazi ukuthenga "irayibha" efanelekayo "yehhashi lakho".
Izinga lokwehla kwamandla emali ovulekile futhi becindezela: definition, izibonelo
Okuncane mayelana nokuthi yi-hemophilia
Funny skits mayelana nothisha ku noSuku Lothisha
Mixer Ledeme: zinhlobo, ezihlukahlukene, ukunakekelwa.
Imithi elwa namagciwane kuvunyelwe ekukhulelweni (2 ngethemu): isidingo ukwamukelwa, umthelela